फेसबुकबाट जोडिएको एउटा प्रेम – Ram Kumar Pariyar
Next श्रावण महिना र यसको महिमा
Previous ठगहरु देखि सावधान हुनुहोला – भोगाई
अनुभुती · २०७३ श्रावण १ 0
फेसबुकबाट जोडिएको एउटा प्रेम
रामकुमार परियार |	२०७३ श्रावण १
बेबि , नियतीको खेल पनि क्या गजब छ हगि ? हिजोसम्म हामी अलग अलग बाटोमा थियौं । गन्तव्य पनि अलग । लाग्थ्यो तिमी पुर्व जाँदै छौ म पश्चिम । तर आज हामी एउटै दिशाको यात्री बनेका छौँ । गन्तव्य पनि एउटै । तिम्रो विचार र मेरो विचार कत्ती भिन्न थियो हगि ? यहि विचार नमिलेर हामी कत्ती लड्यौँ , कत्ती झगडा गर्यौँ , ठुस्स परेर एकअर्कासंग नबोल्ने परिस्थिति पनि थुप्रै आए । तर आज हेर त ! हामी एउटै बाटोको सहयात्री बनेका छौँ । गन्तव्य पनि एउटै , तिमी जहाँ जान्छौ , म त्यहीँ ।
चुम्बकको असमान ध्रुवहरुबिच आकर्षण भएझैँ हिजो पर-पर भाग्ने हामी आज एकै ठाउँमा उभिएका छौँ । अझ भन्नुपर्दा टाँसिएका नै छौँ , जति नै छुट्याउन खोजेपनी टाँसिई हाल्ने । अब त जुनसुकै तत्वको घर्षणले पनि हाम्रो आकर्षणलाई धमिल्याउन सक्दैन ।
बेबि , हिजो जस्तो लाग्छ तिमिसंग मेरो चिनजान भएको । यहि फेसबुकको दुनियाँमा मैले भेटेको तिमिलाई , हिजै जस्तो लाग्छ । औँंला भाँच्दा थाहा पाएँ भर्खर दुई महिना भएछ । तर हाम्रो सामिप्यता हेर्दा लाग्छ हाम्रो संबन्ध जुगजुगान्तर पुरानो हो ।
हो बेबि , साँच्चै तिमिसंगको नाता धेरै पुरानो भए जस्तो लाग्छ । हुन त हाम्रो भेट यहि फेसबुकमै भएको हो , फेसबुकमा भएका करिब ३५ सय साथीहरू मध्ये तिमी एक हौ । तर किन ती सबै साथीहरू भन्दा तिमी धेरै माथी छौ । त्यति धेरै साथीहरूको माझमा पनि तिमिलाई मात्रै देख्छु ।
हुन त अरु सबै साथीहरुलाई म सम्मान गर्छु । माया गर्छु । तर अन्य साथीहरूबाट जुन अनुभूति हुन्छ तिमीबाट बिल्कुल फरक पाउँछु । तिमिबाट जुन आत्मीयता र अपनत्व मिल्छ त्यो अरुबाट मिल्दैन ।
हिजोका दिनहरुमा जतिबेला हामी भर्खरै साथी बनेका थियौँ । त्यो पहिलो च्याट सम्झिन्छु , हामी बिच भएको “तपाईं” को सम्बोधन अनि खुलेर गरिएको कुराकानी । आ-आफ्नो परिचय र दैनिकी सबै क्या खुलेर सुनाएका थियौँ हगि ?
त्यो क्रमले बिस्तारै निरन्तरता पाएपछि हामी कत्ती नजिकियौँ है ? त्यो पहिलो रात सम्झिन्छु , जुन सिंगैरात हामीले फेसबुकमा कुरा गरेर बितायौँ । त्यसपछि त हाम्रो मित्रता झन नजिकियो । बिहान , दिउँसो , साँझ र राती चारै प्रहर हामिले कुरा गरेर बिताउन थाल्यौँ । हरेक दिन करिब १८ घण्टा त हाम्रो नियमित कुरा हुन थाल्यो ।
तिमिले अति व्यस्त समयको बाबुजुद पनि मेरो निम्ति भरमग्दुर समय निकाल्यौ । काम गर्दागर्दै पनि कानमा ईयरफोन लगाएर मसंग बोल्ने समय मिलायौ । त्यसबाट म धेरै प्रभावित भएँ । हाम्रा व्यवहारिक कुराहरु , सुखदुःखका अनुभुतीहरु अनि संघर्षका कथाहरु सबै आदानप्रदान भए ।
व्यस्त प्रवाशी जीवन , त्यसमाथि पनि तिम्रो अति व्यस्त दैनिकीबाट मसंग कुरा गर्न समय निकाल्नु चानचुने होईन बेबि । तिमिले फेसबुक , वाट्सएप र ईमोमा पठाईरहने म्यासेज , मेरो खानपिन र आरामप्रतिको केयरिङको म कसैगरि पनि व्यख्या गर्न सक्दिन ।
हो बेबि , तिमिले एउटा असल साथिको दायित्व पुर्ण रूपमा निभायौ । मैले केकति सकेँ त्यो भगवान जानुन , या त तिमी स्वयं जान्दछौ । हाम्रो असल मित्रताको संबन्धमा त बिस्तारै प्रेम अंकुरण भईसकेछ । तिम्रो र मेरो पहिलो भेटबाट मात्रै पो पत्तो पायौं , हामी दुवैले ।
हाम्रो आ-आफ्नै संसार छ । सामाजिक , व्यहारिक , पारिवारिक व्यवधानहरु पनि छन् । यो जान्दाजान्दै पनि हामी बिच अन्जानमै प्रेम बसिसकेछ । तिम्रो विगत तिमिसंग छ , मेरो विगत र वर्तमान पनि मसंगै छ । यद्यपि हामिले एक हुने सपना देखि सकेको छौँ । थाहा छैन यो सपना सपना मै सिमित हुने हो वा यथार्थतामा सार्थक हुने हो । तर म तिमिलाई सांच्चिकै माया गर्छु बेबि । ह्र्दयमै राखेको छु तिमिलाई । तर पनि तिमी कहिलेकाही मजाक पो गरेको त होईन भनेर शंका गर्ने गर्छौ । दु:ख लाग्छ मलाई ।
कहिलेकाही तिमिले मेरो मायालाई बुझ्न नसकेको हौ की जस्तो लाग्छ । कहिलेकाही त तिमिले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्छौ । तर तिमी आफै त्यसलाई गलत सावित गरिदिन्छौ । खुसी लाग्छ । संसारमा सबैभन्दा धेरै माया गर्ने मान्छे भेटेको अनुभुती हुन्छ ।
हो बेबि , म साँच्चिकै तिमी भित्र हराउँछु अनि सुन्दर सपनाको शहरहरुमा शयर गर्न पुग्छु । हुन त यो पत्र पढ्दै गर्दा तिमिलाई हाँसो लाग्ला , तर यथार्थ यहि हो । म सारा संसार भुलेर तिम्रो मायाको सगरमा डुबुल्की मार्न पुगेछु । तैरिन आउँदैन , सकुशल निकाल्ने जिम्मा तिम्रो ।
बेबि , तिमिलाई सबै थाहा छ मेरो बारेमा । साथ दिन्छु पनि भनेकै छौ । तर पनि कहिलेकाही शंका लाग्छ । सायद मायामा शंका हुने नै भएर होला । तर म तिमिलाई विश्वास गर्छु , यहि विश्वासको बलले शंकालाई जित्ने कोसिस गर्दैछु ।
हुन त संसारमा माया भन्दा शक्तिशाली अरु छैन भनिन्छ । तर यस्तै मायाहरु पराजित भएका कैयन उदाहरणहरु हाम्रै वरिपरि छन् । तिमी र म पनि भुक्तभोगी नै हौँ । भोगेका छौँ , त्यसैले कहिलेकाही डर लाग्छ । कतै हाम्रो सपनाको धरोहर पनि सिसा झैँ चकनाचुर हुने त होईन ?
बेबि , मैले जुन विश्वास तिमिमा गरेको छु त्यो कहिले नतोड ल ! मलाई थाहा छ तिमिपनी मलाई माया गर्छौ , त्यसैले त तिमी त्यति धेरै व्यस्त हुँदा पनि मेरो लागि समय निकाल्छौ । मेरो सुखदुःख सोद्छौ । खानपिन , आराम सबै केयर गर्छौ । दिनभरको कामले थकान भएको बेला पनि मध्य रातसम्म सुखदुःख र मायाप्रेमका कुरा गर्छौ । बिहानै म्यासेज पठाएर गूड मर्निङ भन्छौ , बेलुका म डिउटी जाने बेला पनि म्यासेज पठाएर मेरो सुखदुःख र खानपिन सोद्छौ । धेरै खुसी लाग्छ । संसारकै सबैभन्दा धेरै भाग्यमानी मै हुँ कि जस्तो लाग्छ ।
बेबि , आजसम्म तिमिले मलाई जुन साथ र माया दिएकी छौ , सधै यसैगरि दिई राख्नु ल ! म पनि सधै तिम्रै वरिपरि तिम्रो छाँया बनेर बस्न चाहन्छु । मेरो बलबुतो र सौभाग्यले भ्याएसम्म तिमिलाई माया र साथ दिनेछु । हाम्रो आ-आफ्नो मिसन पूरा भएपछी एक हुने सपना पनि चाँडै साकार होस । अन्जान वा जानाजान तिम्रो दिल दुखाउन पुगेछु भने गल्ती सम्झेर माफ गरिदेउ है । म सधै तिमिबाट आजको जस्तै माया र साथ चाहन्छु ।
I Love You My Sweet Heart….Missing You.
पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जन्मदिनको शुभकामना
महिला र दलित मेयर बन्न नसक्ने नै हुन त ?
अछाममा जातिय भेदभाव विरुद्धको पहिलो मुद्दा दर्ता